မူလနေရာ - Hebei-China
ငွေပေးချေမှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတ်မှတ်ချက်များ: ကြိုတင်ပေးငွေ 30% T / T, 70% T / T ကြိုတင်မတင်ပို့မီ
ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန်: ရက် ၂၀ အတွင်းအပ်နှံပြီးနောက်
20T / D MAIZE MILL MACHINE ၁။ စွမ်းရည် - ၂၀T / D ပြောင်းဖူး ၂ ။ အဆောက်အအုံအရွယ်အစား - ၂၆ * ၆၅ * ၁၈ ပေ (W * L * H) ၂။ စုစုပေါင်းပါဝါ - ၇၉ ကီလိုဝပ်၊ ၃၈၀V နှင့်ကြိမ်နှုန်း ၅၀HZ ၃ ။ ပြောင်းဖူးမှုန့်၊ 4. နိုင်ငံရပ်ခြား ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ပညာရှင်များ (ကောက်ခံသည်) ၅ ။ အထွက်နှုန်း - စူပါသန့်စင်ပြီးဆန်ခါဂျုံမှုန့် (အဖြူရောင်စင်) ၈၀-၈၂%၊ 18-20% byproducts ။ ၆ အချိန်ဇယား - ထုတ်လုပ်မှု - ငွေသွင်းပြီးရက် ၃၀ အတွင်းတရုတ်မှမွန်ဘာဆာသို့ ၃၅ ရက် - ၇ ရက်။ ။
50T / D MAIZE MILL MACHINE ၁။ 50T / 24H အလိုအလျောက်ပြီးပြည့်စုံသောကြိတ်ခွဲထားသောကြိတ်ခွဲစက် ၂။ အလုပ်ရုံ၏အရွယ်အစား - (L × W × H) ၂၈ × ၉ × ၇ ဒသမ ၂ မီတာ ၃။ စုစုပေါင်းပါဝါ - ၁၃၉.၃၁ ကီလိုဝပ်နှင့်ဗို့အား ၃၈၀V နှင့် ကြိမ်နှုန်း 50HZ × 3P ၄။ ကွန်တိန်နာများ - ၄၀ ပေနှင့် ၂၀ ပေ ၅။ ထုတ်ယူမှုနှုန်း - အလွန်ကောင်းသည့်ပြောင်းဖူးမုန့်ညက် ၇၈-၈၅% (ချိန်ညှိနိုင်သည်) ပြောင်းမှဖွဲ၊ ပြောင်းနှင့်ဂျုံမှုန့်၊ ၆။ အချိန်ဇယား - ထုတ်လုပ်ချိန် - ၃၅ ရက်၊ Mombasa သို့သင်္ဘောဖြင့်တင်ပို့ခြင်း - ၃၃ ရက် ၇ ။ ငွေပေးချေမှု - TT အားဖြင့်အပ်ငွေအဖြစ် ၃၀%၊ TT ၏လက်ကျန်ငွေသည် ...
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်: သိုက်အပေါ်သို့ 45 ရက်အတွင်း
100T / D MAIZE MILL MACHINE ၁။ စွမ်းရည် - ၁၀၀ တန် / ၂၄ နာရီပြောင်း။ ၂။ ထုတ်ကုန်များ - ပြောင်းဖူးမုန့်ညက် ၇၈ မှ ၈၂% (၇၀% မှ ၂၅၀ မိုက်ခရွန်အထိ)၊ ၃။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတိုင်းအတာ (L × W × H) ၃၀ × ၁၀ × ၁၀.၅ မီလီမီတာ။ 4. စုစုပေါင်းပါဝါ: 319KW, 380VX50Hz အကြောင်းကို55. ကွန်တိန်နာ: 40ft ×4(2 HQ)
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်: သိုက်အပေါ်သို့ 10 ရက်အတွင်း
30T / D MAIZE MILL MACHINE ၁။ စွမ်းရည် - ၃၀T / D ၂။ အဆောက်အ ဦး အရွယ်အစား - ၃၀ * ၆၅ * ၁၈ ပေ (W * L * H) ၂။ စုစုပေါင်းစွမ်းအား - ၈၂ ကီလိုဝပ်၊ ၃၈၀ ဗို့နှင့် ၅၀HZ ၃။ ထုတ်ကုန်များ - ထုတ်ယူထားသော Grade1 ပြောင်းဖူးမုန့်၊ ပြောင်းဖူးမှုန့်၊ 4. နိုင်ငံရပ်ခြား ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ရရှိနိုင်သည့်ပညာရှင်များ (ကောက်ခံသည်) ၅ ။ အထွက်နှုန်း - စူပါသန့်စင်ပြီးဆန်ခါဂျုံမှုန့် (အဖြူရောင်စင်) ၈၀-၈၂%၊ 18-20% byproducts ။ ၆ အချိန်ဇယား - ထုတ်လုပ်မှု - ငွေသွင်းပြီးရက် ၃၀ အတွင်းတရုတ်မှမွန်ဘာဆာသို့ ၃၅ ရက် ၇ တင်ပို့ခြင်း။ ၇။ သန့်ရှင်းရေးစနစ် - ၁ # ရုတ်သိမ်းခြင်း - ပြောင်းဖူးသန့်ရှင်းရေး̵ ...